Vietjet na-ebupụta ụgbọ elu Taipei, Singapore na Hong Kong si Da Nang
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Vietjet na-ebupụta ụgbọ elu Taipei, Singapore na Hong Kong si Da Nang
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong • News • Ndi akuko • Akụkọ na -agbasa na Singapore • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Nwe obodo amalitela ọrụ atọ jikọtara Da Nang na isi ụlọ ọrụ ụwa - Taipei, Singapore na Hong Kong.
A na-atụ anya ka ụzọ ọhụrụ ndị a nye ndị Vietnamese na ndị njem mba ofesi ohere iji mee njem ọfụma ọ bụghị naanị Da Nang, obodo dị n'ụsọ oké osimiri dị n'etiti Vietnam, kamakwa Indochina na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ Asia. Vietnamjet na-arụ ọrụ ugbu a ụzọ ụwa 12 na nke ụlọ si na Da Nang.
A na-eme ememme mmeghe ụgbọ elu na ebe niile yana ọnụnọ nke onye nnọchi anya Vietjet bụ Do Xuan Quang ịnabata ndị njem mbụ batara na Da Nang International Airport si Taipei na Singapore. N’ụgbọ elu ndị malitere, ndị njem nwere obi ụtọ ịnata ọmarịcha onyinye sitere n’aka ndị ọrụ ụgbọelu ahụ.
Dazọ Da Nang - Taipei na-arụ ọrụ kwa ụbọchị bido na 19 Disemba 2019 na-eji ụgbọ elu A320 / A321 ọhụrụ na nke oge a. Flightgbọ elu ahụ si Da Nang pụọ na 10:50 wee rute Taipei na 14:30. Flightgbọ elu nlọghachi na-apụ na Taipei na 15:30 wee rute na Da Nang na 17:30 (All na mpaghara oge). Naanị ihe dị ka awa atọ, ndị njem dị njikere ịchọpụta Taipei - otu n'ime obodo ndị kachasị egwu na Eshia.
Nzọ Da Nang - Singapore na-arụ ọrụ kwa ụbọchị na-amalite site na 20 Disemba 2019 na oge ụgbọ elu nke ihe dị ka 2 hour 40 nkeji kwa ụkwụ. Gbọ elu ahụ si Da Nang pụọ na 12:20 wee rute Singapore na 15:55. Gbọ elu nlọghachi si Singapore na 10: 50 wee rute na Da Nang na 12:30 (All na mpaghara oge). Vietjet nwere ugbu a ụzọ atọ na-ejikọ Vietnam na Singapore, gụnyere Hanoi / HCMC / Da Nang - Singapore nke nwere ụgbọ elu ugboro anọ kwa ụbọchị.
Dazọ Da Nang - Hong Kong na-arụ ọrụ kwa ụbọchị bido na 20 Disemba 2019 na oge ụgbọ elu nke ihe dịka 1 hour 45 nkeji kwa ụkwụ. Gbọ elu ahụ si Da Nang pụọ na 12:45 wee rute Hong Kong na 15:30. Flightgbọ elu nlọghachi na-ebuga na Hong Kong na 17: 20 wee rute Da Nang na 18: 05 (Niile na mpaghara oge). Vietnamjet na-arụ ọrụ ugbu a ụzọ atọ jikọtara Vietnam na Hong Kong, gụnyere HCMC / Phu Quoc / Da Nang - Hong Kong na ngụkọta ugboro ugboro ụgbọ elu atọ kwa ụbọchị.
Vietjet bụ onye na-agbanwe egwuregwu, na -emepụta mgbanwe na ụlọ ọrụ ụgbọelu Vietnamese, na-enye aka na mmepe akụ na ụba obodo na njem njem na mpaghara netwọkụ ya. Ugbo elu nke Vietnamjet na agba ọkọlọtọ Vietnamese, nke na-ebu akara ngosi njem ma na-efe efe na abụ Vietnam Vietnam na-anọchi anya ihe oyiyi nke mba Vietnamese, ọdịdị na ndị mmadụ na ndị enyi na mpaghara ise. Nke a gafere karịa mba 80 na mba Malaysia, China, India, Japan, South Korea, Thailand, Singapore na Indonesia.
Dị ka ụgbọ elu ndị mmadụ, Vietjet na-emepe ụzọ ọhụụ iji weta ọtụtụ ohere iji ụgbọ elu na ọnụ ahịa dị mma maka onye ọ bụla. Site na mmụọ nke "nchekwa, obi ụtọ, ịba uru na ịbịa ihe oge" ụkpụrụ ndị bụ isi, Vietjet ji mpako mepụta ahụmịhe na-agaghị echefu echefu maka ndị njem n'ụgbọ elu ọhụrụ nwere oche dị mma, nhọrọ nke iri nri itoolu na-atọ ụtọ nke ndị ọrụ ụlọ mara mma na ndị enyi na-arụ ọrụ yana ọtụtụ ndị ọzọ ọrụ agbakwunyere nke oge a na ikpo okwu e-commerce.